အာဇာနည်မျိုးသေရိုးမရှိ: မင်္ဂလာဒိုးအဖွဲ့(ဂျပန် )မှ ရဲရဲတောက် သင်္ကြန် သံချပ်တေးများနားဆင်နိုင်ပါပြီ။
2010 ရဲ့ရဲရဲတောက်သင်္ကြန်တေး
သံချပ်များကိုဂျပန်နိုင်ငံရောက် မဂ်လာဒိုး အနုပညာအင်အားစု အဖွဲ့ မှ
လျက်ရှိကြောင်းသတင်းကောင်း ပါးအပ်ပါသည်။မြန်မာပြည်တွင်းမှ
မိမိတို့ ဝက်ဆိုဒ်မှ မ ကြာမှီ ရက်အနည်းငယ် တွင်
http://mingalardoe. homeip.net/ ဗွီဒီယို ကြည့် ရှု နိုင်ရန်အတွက်
သတင်းနှင့်အင်တာဗျူး...... ဆက်သွယ်ရန် ဦးဝင်းရွှေ
ဦးမျိုးသန့်09092414960(ခေါင်းဆောင်)
ပေးပို့တင်ပြသူ အာလူးလေး at 9:19 PM Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook
မိအေးနှစ်ခါနာ ဆိုသောမြန်မာစကားပုံကို လူတိုင်းကြားဖူး ကြပေလိပ်မည်၊ပုံ ပြင်ထဲက မိအေးဟာ နှစ်ကြိမ်ပဲ နားရသည် သို့သော် အမိမြန်မာပြည်မိ အေး သည်ကာ...
မြန်မာပြည်သည် ၂၀၁၁ ခုနှစ် နှစ်ဦးပိုင်း၌ လာနီညာဖြစ်စဉ် ဆက်လက် ရှိနိုင်ပြီး တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ် ပိုမိုဖောက်ပြန်သော ရာသီဥတုကို ကြုံတွေ့ ရဖွယ်ရှိ
T ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၂၂ ရက်နေ့က မုံရွာမြို့၌ မြူနှင်းများပိတ်ဖုံးနေစဉ် ၂၀၁၁ ခုနှစ် တစ်နှစ်တာနှင့် လစဉ်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည့် ရ...
မြန်မာ စစ်ခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မှုး ကြီး သန်းရွှေ နှင့် ၎င်း ၏ မိသားစု သည် အမေရိကန် ဒေါ်လာ သန်း နှစ်ထောင် (နှစ် ဘီလျှံ) ခန့် ချမ်းသာသည် ဟု ယူ...
မြန်မာလိ ချမ်ပီယံ ရတနာပုံအသင်းရဲ့ အောင်ပွဲခံပွဲ မှာ Dancer ခေမီကို က အခုလို ဂုဏ်ပြုခဲ့ပါတယ်တဲ့။
T Myanmar Sexy Dancer, Khay Mi Ko Show Off Her Pantyhose Myanmar Hot and Sexy Dancer, Khay Mi Ko showed off her sexy pa...